Ọnye na-bụ Ali Durmaz? | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌnye na-bụ Ali Durmaz?
16 / 05 / 2020 General, Onye bu onye, VIDIO
Ọnye na-bụ Ali Durmaz
Bulgarian obodo Kardzhali obodo Rusalsko Light n'ime obodo Ali Durmaz mụrụ na 1935, ọ na-abịa Turkey n'afọ 1950, na-ahapụ ihe niile na Bulgaria, ha bido biri na Bursa Mudanya. Ọrụ Durmaz na mkpebi siri ike ịhapụ imebi usoro azụmaahịa n'oge ndụ ya, na-amalite na afọ mbụ nke ndụ azụmahịa na Turkey, Ali nwetara ya aha ndị Jam.
Ka ọ na-erule n’afọ 1956, ọkụ rere ụlọ ahịa Durmaz na Archers Bazaar n’ọkụ. Durmaz, bụ onye jisiri ike kpuchie ụfọdụ ọnwụ ya n'ihi na ọ mkpuchi ụlọ ahịa ya ọnwa 6 gara aga, na-edebe ụlọ ahịa ọhụrụ na-enweghị nkwụsịtụ ọ bụla ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya ebe a.
Durmaz, nke mepụtara igwe na-akwa akwa mgbe mbụ ọ malitere azụmahịa ya, na-aga n'ihu igwe ndị a ruo afọ iri atọ na asaa. N'ihi ntuli aka nke 37 na ọnọdụ akụ na ụba na-esote, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa kpọchiri ụzọ ha, 'onye' stobacilar ', onye bịara ọbịbịa Durmaz, nyere iwu ịkpụ ntutu ntutu anọ wee banye na mmepụta nke igwe eji edozi ntutu. Mkpa a ghọrọ 'ụmụ akwụkwọ' nke Ali Durmaz mgbe ọtụtụ afọ gachara.
Ali Durmaz họọrọ ọrụ ike. Ndụ ya hiwere ka ọ rụọ ọrụ ma jeere obodo ya ozi. Ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ ma na-amachikwa ndị umengwụ. Ọbụna inwe obi ụtọ maka Ya ga-adị n'etiti ọrụ. Durmaz kwuru, "Enwetabeghị m ezumike, aghọtaghị m ihe kpatara Sọnde m bụ ezumike. M na-abịakwa arụ ọrụ na Sọnde. Bọchị asaa kwa izu maka m, ụbọchị asaa n'izu ”. Igwe eji eme ihe na Bursa na Turkey bu aha eweputara n’uwa. Ọ na-arụ ọrụ bara ụba nke ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ ya, nyere ndị kwagara Bulgaria aka site na ịnabata ha n'ụbọchị siri ike. Durmazlar Ngwa Inc. onye guzobere ụlọ ọrụ Ali Durmaz bụ onye gụsịrị akwụkwọ na kọleji Vocational High School wee kwuo German.
Ali Durmaz, onye nwụrụ na 07.11.2004, jere ozi dịka onye otu Bursa Chamber of Commerce and Industry, ndị otu Busiad, Uludağ University Faculty of Engineering and Architecture Technology Foundation, Ndị Nlekọta Mgbatị Elu Maka Mmepụta Ugwu, yana ndị ọrụ ebere na mkpakọrịta dị iche iche.
Mostkpụrụ kachasị mkpa nke Ali Durmaz na ndụ ya bụ nghọta nke ọrụ ọ nabatara ma chọọ ịgbasa na ndụmọdụ ya nye ọgbọ na-esote:
“Mee Ihe Kachasị Mma na You Na-eme.”
Onye MHP Deputy Durmaz nyere Ankara-Sivas YHT ngwa ngwa
Durmaz, Ụgbọ ala ebe a kwesịrị akwado
A na - akpọ onyeisi GESOB, Ali Kara, maka ndị ọchịchị
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 12 November 1935 Irmak-Filyos line Ali Çetinkaya, osote onye isi okpu Nafia
Line Bursa Tram dị n'okporo ụzọ Tayyaiche Mehmet Ali Street na Selçukbey Street.
Onye isi obodo Mayor Kadir Topbaş Ali Sami nọ na Mecidiyeköy, ebe mbido ele